को हुन नेकपा गुल्मीको हुनेवाला अध्यक्ष वालसिंह काउछा ? – Gulminews
Home/समाचार/को हुन नेकपा गुल्मीको हुनेवाला अध्यक्ष वालसिंह काउछा ?
को हुन नेकपा गुल्मीको हुनेवाला अध्यक्ष वालसिंह काउछा ?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ श्रावण ३१, बिहीबार १९:२३ मा प्रकाशित
गुल्मी, साउन ३१ । मगराँत प्रदेश माग गर्दै पश्चिम नेपालीमा अधिकांस जनजाति नेता , कार्यकर्ता र सर्वसाधरण सम्म सदन र सडक तताई रहेका बेला गुल्मीमा भने उनै एक नेता थिए जसले न आफु भड्किय न तत्कालिन नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई भड्काए ।
साविक तम्घास गाविस–४ हाल रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्वर ८, खानीगाउँ ओखरवोटमा २०२२ साल असार ३१ गतेका दिन पिता रुपसिंह काउछा थापा र माता धनकलाको कोखबाट जन्मिएका काउछा वाल्यपन देखि नै विद्रोही स्वभावका थिए । त्यति वेला पुरै कांग्रेसको दवदवा रहेको तम्घासमा कम्युनिष्ट बनेर खुल्नु भनेको चानचुने कुरा थिएन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा ढुङ्गा मुढा खाँदै सशक्त रुपमा उत्रिए पछि काउछा २०४७ सालतिर तत्कालिन प्ररायु संघ तम्घास गाउँ कमिटीको सचिवमा चुनिए । संघको जिल्ला सचिव र तम्घास गाउँ कमिटीको पार्टी सचिवको जिम्मेवारी पनि संगै गरे ।
२०४९ सालमा ईलाका नम्वर ८ र ९ को संयुक्त रुपमा नेतृत्व सम्हाले । त्यस पछि प्ररायु संघको जिल्ला अध्यक्ष भए । संघको उनि चोश्रो अध्यक्ष थिए । संस्थापक अध्यक्ष वोमबहादुरको पालामा उनि सचिव थिए । मधुकृष्ण पन्तको पालामा पनि सचिव नै भए । सोमनाथको पालामा पनि सचिव नै थिए ।
त्यस पछि मात्र उनि अध्यक्ष भएका हुन । जिल्ला पार्टीको छैठौ, सातौ र आठौ सम्म पार्टीको जिल्ला सदस्य नै रहे । नवौ र दशौं अधिवेशन दुवै कार्यकाल सम्म उनि उपसचिवको जिम्मेवारीमा छन । उनलाई नेकपा प्रदेश ५ को कार्यदलले गुल्मीको जिल्ला अध्यक्षमा सिफासिस गरेको छ ।
५३ बर्षको जिवन यात्रामा पाईला टेकेका काउछा अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको प्रति पार्टीले आफुलाई न्याय गरेको छोटो प्रतिकृया दिए ।
अव संयुक्त पार्टी कसरी मिलाएर लैजानु हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी कम्युनिष्टमा ब्यक्ति हावी हुने कुरा हुँदैन, नेता एक भए पनि सामुहिक नेतृत्व हुन्छ । सवैलाई मिलाएर लैजाने छु । टिम वर्क नै ठुलो कुरा हो । सवै नेता गणले हाँक्छौं पार्टी सशक्त रुपले अगाडी बढ्ने छौं । तपाई मार्फत शुभेछुकहरु सवैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
जिसी क्षेत्र नम्वर २ मा प्रतिनिधी सभा सदस्यको टिकट पाएका थिए । तर एमालेसंग बाँडफाँड गर्दा नमिले पछि हापेर पुर्व एमाले नेता विष्टको चुनावी प्रचारमा खटेका थिए । त्यस कारणले पनि अहिले आफुले अवसर पाउनु पर्ने उनको दावी छ । गुल्मीमा जिल्ला कमिटीका लागि पुर्व एमालेबाट ६० प्रतिशत र पुर्व माओवादीबाट ४० प्रतिशतको जिल्ला कमिटी बन्ने भएको छ ।